HomeWararka CiyaarahaLabo kamid ah Xidigaha Liverpool oo seegi doono Kulanka Watford
Labada xiddig ee Liverpool Alisson Becker iyo Fabinho ayay u badan tahay inaysan ka soo muuqan doonin kulanka Premier League ee ay Sabtida la leeyihiin Watford.
Labada nin ayaa looga yeeray xulka Tite Ama Brazil ee isreeb -reebka Koobka Adduunka ee Oktoobar, kaasoo ku dhammaan doona kulanka ay Brazil kula ciyaari doonto Uruguay saacadaha hore ee subaxnimada Jimcaha xilliga UK.
Kooxda Jurgen Klopp ayaa furi doonta ciyaarta siddeed dhamaadka xilli ciyaareedka Premier League iyadoo la ciyaari doono Sabtida marka ay la ciyaarayaan Watford, tababaraha Liverpool ayaana hore u sheegay dareenkiisa ku saabsan jadwalkaas.
Sida laga soo xigtay The Telegraph , waa “wax aan macquul ahayn” in Alisson iyo Fabinho ay dib u duulaan oo ay diyaar u noqdaan inay ciyaaraan galabnimada Sabtida, iyadoo Klopp uu go’ansaday inay ka maqnaadaan labadiisa xiddig ee reer Brazil toddobaadkan.
Tababaraha Reds ayaa sidoo kale ka walwalsan taam ahaanshaha Diogo Jota ka dib markii uu ka tagay xerada Portugal kadib markii uu dareemaydhibaato dhanka muruqa, laakiin waxa uu dib u helay Trent Alexander-Arnold.
Liverpool ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka Premier League ka hor inta aysan martigelin Watford, taasoo noqon doonta kulankiisii ​​ugu horeysay ee Claudio Ranieri uu maamulo Hornets.